ငြိမ်းချမ်းအောင် | MoeMaKa Burmese News & Media
နိုင်ဦးညို (ဖိုးဇီးရိုး) - ရိုမန်းဘော့ထ်ရယ် သနားတယ်
ကာတွန်း မိုးသွင် - ဒီမိုကရေစီက အနိုင်ကျင့်သတဲ့လား
၀င်းအောင်ကြီး (မောင်အောင်မွန်) - ပန်းချီဆရာ ပြည်တွင်းစစ်နှင့် ၀န်ကြီးချုပ်
Posts Tagged ‘ ငြိမ်းချမ်းအောင် ’
ငြိမ်းချမ်းအောင် ● ၃ဝ/၃ဝ/၃ဝ (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂ဝ၁၇ သမီးရေ …. ဖေဖေ ဒီနေ့ပြောချင်တာက ဘဝမှာ ၃ဝ/၃ဝ/၃ဝ ဆိုတဲ့ ဖွားဖွားတယောက်ရဲ့ အကြောင်းပဲကွဲ့။ အသက် ၉ဝ ပြည့်...
ငြိမ်းချမ်းအောင် ● ပြည်သူ့စစ်သား (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၇ သမီးရေ ဒီနေ့ ဖေဖေပြောမှာက ပြည်သူ့စစ်သားဆိုတဲ့ စက်သေနတ်ပစ်ရတဲ့တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးတဲ့ စစ်သားကြီး တယောက်အကြောင်းပေါ့ သမီးရယ်။ အသက် ၉၀ ကျော်...
ငြိမ်းချမ်းအောင် ● သမီးရေ ….
ငြိမ်းချမ်းအောင် ● သမီးရေ …. (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ ဖေဖေတို့ မိသားစုတွေ ဒီမနက် နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာတွေနဲ့ လည်ပတ်နေတဲ့ တီဗွီအစီအစဉ်အကို ကြည့်မိကြတယ်နော်။ ပြည်သူပိုင် မီဒီယာတွေကို အသုံးပြုပြီး ပညာပေးအစီအစဉ်တွေ၊...
ငြိမ်းချမ်းအောင် ● သမီးရေ …. (ဖင်လန်နိုင်ငံက ကားလိုင်စင်တွေရဲ့အကြောင်း) (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၆ ဖေဖေ့ရဲ့ကုန်တင်ကားမောင်းတဲ့ လိုင်စင်ကိုကြည့်ပြီး ခရီးသွားကားမောင်းလို့ရလားလို့ သမီးမေးတယ်နော်။ ဖေဖေလည်း အခုမှ သမီးကို ကားလိုင်စင်တွေရတဲ့အကြောင်းကို ပြောပြရအုံးမယ်။...
ငြိမ်းချမ်းအောင် ● အနော်ရထာခေတ်ကို ပြန်ရောက်သွားတဲ့ တိုင်းပြည် (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၆ သမီးရေ လူတချို့က တော်တော်များများလို့ ပြောရမှာပေါ့ကွယ်။ ဗမာနိုင်ငံကို ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီလို့ ပြောကြတယ်ကွဲ့။ တကယ်တန်း အဲဒီလိုပြောနေတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ဓါတ်တွေက ဘယ်လိုလည်း၊...
ငြိမ်းချမ်းအောင် ● သမီးရေ (မူးယစ်ဆေးဝါး လူငယ်တို့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ တာဝန်ယူခြင်း) (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၃၊ ၂၀၁၆ ကျောင်းမှာ ဆရာမတွေက မိဘတွေကို ခေါ်ပြီး သတိပေးတယ်နော်။ ရုရှားနယ်စပ်မှာ အင်ဖက်တာမင်း (စိတ်ကြွဆေး) တွေကို...
ငြိမ်းချမ်းအောင် ● သမီးရေ …. ဆာမဲ လူမျိုးစုအကြောင်း (ဖင်လန်နိုင်ငံ)
ငြိမ်းချမ်းအောင် ● သမီးရေ …. ဆာမဲ လူမျိုးစုအကြောင်း (ဖင်လန်နိုင်ငံ) (မိုးမခ / သစ်ခက်သံလွင်) နိုဝင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၆ သမီးမှတ်မိသေးလား ဆရာမကို ဖေဖေအကြောင်းကြားပြီး ၄ တန်းမှာသင်တဲ့ ဖင်လန်နိုင်ငံသမိုင်းကို...
အိချယ်ရီအောင်၊ အောင်ငြိမ်းချမ်း ● အိမ်အကူကို အနည်းဆုံး တစ်ပတ်မှာ တစ်ရက် အနားပေးရမယ်
အိချယ်ရီအောင်၊ အောင်ငြိမ်းချမ်း ● အိမ်အကူကို အနည်းဆုံး တစ်ပတ်မှာ တစ်ရက် အနားပေးရမယ် (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၆ ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားအဖွဲ့၏ ရန်ကုန်ရုံးမှ အရာရှိနှစ်ဦးက ကလေးအလုပ်သမား၊ အိမ်အကူလုပ်သားတို့၏ အခွင့်အရေးအ ကြောင်း...
ငြိမ်းချမ်းအောင် ● အပေါ်ယံတွေ သိပ်များတယ် (မိုးမခ/သစ်ခက်သံလွင်) အောက်တိုဘာ ၆၊ ၂ဝ၁၆ ဖင်လန်ပညာရေးစနစ်မှာ စာမေးပွဲ ရှိပါတယ်။ ကလေးတွေကို ၁ လ တခါ၊ ဒါမှမဟုတ် ၂ လ တခါ...
ငြိမ်းချမ်းအောင် ● ကျောင်း (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၆ ကိုယ်တွေ့တွေပြောရတာတောင် ဗမာပြည်မှာက ငါမသိရင် အရူးစကား ဆိုပြီး ဟာသလုပ်တော့ ကျနော် ဘာမှမပြောချင်တော့။ ဒါကြောင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင် ဖင်လန်နိုင်ငံက...
ငြိမ်းချမ်းအောင် – ပညာရေး ပျက်စီးမှုအကျိုးဆက်တွေ မျိုးဆက်သစ် ခံနေရပြီ
ငြိမ်းချမ်းအောင် – ပညာရေး ပျက်စီးမှုအကျိုးဆက်တွေ မျိုးဆက်သစ် ခံနေရပြီ (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၆ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ၀င်လာတာ မ၀င်လာသေးတာ အသာထား၊ လောလောဆယ်မှာတော့ မြန်မာပြည်မှာ NGO တွေ တော်တော်များနဲ့...
ငြိမ်းချမ်းအောင် – မိဘမဲ့ ဒုက္ခသည်
ငြိမ်းချမ်းအောင် – မိဘမဲ့ ဒုက္ခသည် (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၉၊ ၂၀၁၅ သားရေ ရောက်တဲ့နေရာမှာတိုင်းမှာ မိဘရှာပါလို့၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို မိဘတွေလို သဘောထားပါလို့ အသက်တွေ မရှည်ပေမဲ့ ဒုက္ခတွေ သမုဒ္ဒရာလိုကျယ်ပြန်တဲ့...
ငြိမ်းချမ်းအောင် – ကိုယ်ကောင်းပေမဲ့ ပုံစံပျက်သွားသော ဆံပင်
ငြိမ်းချမ်းအောင် – ကိုယ်ကောင်းပေမဲ့ ပုံစံပျက်သွားသော ဆံပင် (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၀၄၊ ၂၀၁၅ ကျောင်းသားတပ်မတော်နဲ့ ပြည်သူလူထုပူးပေါင်းထားသော စစ်ကြောင်းကြီးတွေ စစ်အာဏာရှင်ကိုဖြုတ်ချပြီး မြန်မာနိုင်ငံ တ၀န်းလုံးကို သိမ်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့ သတင်းစကားကို ပြည်သူတွေကိုပေးဖို့ တချိန်က...